Mifamory mba hankalaza ny fahazoana miditra aterineto any Kambodza · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Marsa 2011 16:51 GMT
Izany no hafatra ho an'ny Andron'ny Zavona izay hatao amin'ny Zoma 4 Martsa eo amin'ny tsangambaton'ny fahaleovantena izay mampiseho ny hetsika fanafahana tamin'ny Fanjanahantany Frantsay tamin'ny 1950. Nambaran'i Nate Sovatha tamin'ny facebook ny fanasana.
Mampitandrina ireo mpandray anjara ny mpikarakara mba tsy hampiasa an'io hetsika io amin'ny antony ara-politika no sady manantitrantira fa tsy tolona io hetsika io, ary miezaka tsy miresaka momba ny tolona any amin'ny firenena Arabo maro. Ankoatr'izay ary, nanasongadina ny endrika tsy misy politika an'ity fihaonambe ity ny mpikarakara no sady tonga saina amin'ny fanapahan-kevitra goavana avy amin'ny governemanta sy mahatakatra fa ny lalàna any Kambodza dia mila alalana ho an'ny fiihaonambe toa izany any amin'ny toerana antsoina hoe Kianjan'ny Fahalalahana:
Na dia tsy resaka politika aza ity, ny hetsika karakaraina amin'ny alalan'ny fampielezam-baovao sosialy tahaka izao dia mety handrangitra ny governemanta, izay vao tsy ela no nandà fa tsy nibaiko ny fanasakanana ny vohikala sasany izay miandany amin'ny mpanohitra na hita ho ratsy ho an'ny fitondràna; ary ireo mpitarika ao amin'ny governemanta koa dia nanameloka ampahibemaso ireo mpanolotra vaovao izay mampitaha an'i Kambodza amin'ny toe-draharaha any Ejipta sy Tonizia.
Manomboka ny fanisàna ho an'ny Fampanjavonana ny Tsagambaton'ny fahaleovantenan'i Phnom Penh. Hosamborina ve ireo mpandray anjara amin'ity hetsika tsy ara-politika ity?